गुन्द्रुकको इतिहास : कसरी एउटा सामान्य ‘साग’ नेपालीको पहिचान बन्यो ? – Khabarhouse
गुन्द्रुकको इतिहास : कसरी एउटा सामान्य ‘साग’ नेपालीको पहिचान बन्यो ?
Khabar house | ६ माघ २०७६, सोमबार ०८:१७ | Comments
गुन्द्रुक । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको मौलिक परिकारको पहिचान बनाएको एउटा ‘तरकारी’ । भनिन्छ, जहाँ नेपाली पुग्छन्, त्यहाँ गुन्द्रुक पनि पुग्छ! हरेक नेपालीको ‘प्रिय’ तरकारी गुन्द्रुक यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो त? अर्थात् एउटा हरियो सागलाई कसरी कसैले गुन्द्रुकजस्तो ‘तरकारी’ बनाउने विधि पत्ता लगायो ? इतिहासकारहरु गुन्द्रुकको ‘उत्पत्ति’लाई नेपाल एकीकरणका क्रममा भएका युद्धसँग जोड्छन् ।
गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले पहिलोपटक कीर्तिपुर आक्रमण गर्दा कीर्तिपुरेहरुको बारीमा लहलह साग थियो रे! कीर्तिपुरेहरुले साग टिप्न पाएका थिएनन्, गोरखालीहरुले आ’क्रमण गरिहाले । आफूमाथि आक्रमण भएपछि कीर्तिपुरेहरु पनि प्र’तिकारमा उत्रिनु पर्‍यो । प्रशस्त सैन्य शक्ति नभएको अवस्थामा कीर्तिपुरका महिला देखि बालबच्चा सबैले युद्धमा भाग लिनु पर्‍यो । आफूहरुले यु’द्धमा गएको बेला बाहिरका व्यक्ति आएर खानेकुरा, साग चो’री देलान् भन्ने डरले कीर्तिपुरेहरुले जुक्ती लगाए– खाद्यान्न सहित सागपात खाल्डोमा पुरेर युद्ध गर्न जाने !
त्यसपछि बारीमा लहलह फलेको साग टिपेर सबैजनाले खाल्डोमा पुरे । जब यु’द्धबाट फर्किएर आए, सबैजनाले खाल्डो उधिनेर लुकाएको खाद्यान्न बाहिर निकाले । बाहिर निकालिएको खानेकुरा मध्ये धान चामल लगायतको अन्न त पकाउन सकिने अवस्थामै थियो । तर, लुकाएको साग भने खाल्डोमै गलेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्यो । कीर्तिपुरेहरुले केही दिन भोक टार्नका लागि तरकारीविनै भात–रोटी खाए । तर, केही दिन पछि त तरकारी आवश्यक पर्‍यो ।
खाल्डोबाट निकालिएको साग बारीमा फिँजाएर त्यत्तिकै राखिएको (फालिएको) थियो । खाल्डोमा राख्दा गलेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको साग बारीमा फालिएको अवस्थामा घामले सुकेर कक्रक्क परेको थियो। पछि केहीले बारीबाट त्यही सुकेको साग टिपेर ल्याइ पकाउन थाले । अलिकति अमिलो–अमिलो, तर असाध्यै मिठो स्वादको सुकेको साग (तरकारी)ले पुरै कीर्तिपुरमा चर्चा पायो । कलान्तरमा यसको नाम गुन्द्रुक रहन गयो । जुन अहिले आम नेपालीको एक मौलिक परिकार बन्न पुगेको छ ।